Iihotele ezinamandla elanga | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Iihotele ezinamandla elanga
Adriana | | Ukonga umbane, Photovoltaic Solar Amandla
Umzi mveliso wehotele licandelo elibalulekileyo lezoqoqosho njengoko kukho amawaka eehotele zabo bonke ubukhulu emhlabeni. La malinge achitha imali eninzi umbane namandla ngenxa yeenkonzo abazinikelayo kwiindwendwe zabo.
Kodwa namhlanje utyekelo yonga amandla kwaye ibe yeyendalo nangakumbi, yiyo loo nto iihotele ezininzi emhlabeni ziphinda ziyila izakhiwo zazo, iinkqubo zokufudumeza nokupholisa, phakathi kwezinye izinto, ukuzenza zibenobungqongileyo kokusingqongileyo.
Imizekelo emibini ekufuneka ithathelwe ingqalelo yile: Ihotele yaseCrowne Plaza eDenmark ifake iiphaneli zelanga kumphambili wazo ezibonelela ngenxalenye enkulu yamandla ayo. Ukongeza kuyilo kunye iteknoloji ezinzileyo amandla enza ukuba isakhiwo sisebenze ngakumbi, sivumela ukusetyenziswa okungcono kwamandla.
Le ihotele igcina malunga neepesenti ezingama-50 zokutya okusetyenziswayo ngendlela efanayo neenkqubo zamandla eziqhelekileyo.
Elinye ityala elibaluleke kakhulu lelo lehotele ePower Valley iJingjiang yamanye amazwe eChina. Ihotele eneenkwenkwezi ezintlanu inamagumbi angama-291 kunye nezinto ezininzi ezongezelelweyo ezinje ngeeresityu nakumagumbi emisitho.
Le ihotele ivelisa iipesenti ezili-10 zamandla eyisebenzisa ngamandla elanga kuma-3800 ayo iimodyuli ze-photovoltaic. Enye into ebalulekileyo kukuba inenkqubo yokuphinda isebenzise amandla ashushu kumanzi amdaka kwaye iwuguqulele ekubeni kukufudumeza, ukupholisa kunye namanzi ashushu.
Iihotele zifumana izibonelelo zamandla elanga kunye nokusingqongileyo kunye noyilo oluzinzileyo lwamandla ukugcina amandla kunye nemali eninzi.
Ikwayindlela yokuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zabathengi abafuna ulawulo olungcono lokusingqongileyo ziinkampani.
Ngokuqinisekileyo iihotele ezininzi emhlabeni ziya kuxelisa ezi zenzo kuba zilungile kuwo onke amaqela.
Yonga amandla kwaye uvelise amandla avuselelwe Kukuzibophelela kwabo bonke, kodwa amashishini amakhulu kunye neenkampani zinoxanduva olukhulu kuba zitya kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Iihotele ezinamandla elanga
I-Asiya kunye namandla ahlaziyekayo